Raim-pianakaviana iray sahabo ho 40 taona no fantatra fa matin’ny pesta (peste bubonique) tany amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Morarano Gara (MLA), Moramanga, androany alakamisy 19 novambra. Nanamafy izany ny tompon'andraikitra iray izay nilaza fa voatery nandray an-tanana ny fikarakarana ny razana ny eo anivon’ny fitantanana ny Kaominina. Tonga nanamarina izany tany an-toerana ny tompon'andraikitry ny fahasalamana avy any Moramanga sy ny solontenan’ny mpitandro filaminana. Nalevina tao amin’ny fasam-bahiny ao Antsimisoritra ny razana tamin’ny maty masoandro, taorian’ny fizahana araka ny voatondron’ny lalàna amin’ny tranga toy itony.Manaraka ny fombafomba sy ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy arahina ny fandevenana.
Noraisin’ny Praiminisistra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, teny amin’ny lapam-panjakanan’i Mahazoarivo androany ny delegasiona avy any Arabia Saodita, izay notarihin’ny minisitra Saodiana eo anivon’ny raharaham-bahiny miandraikitra an’i Afrika, Ahmad Bin Abdulaziz Kattan. Ho fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’i Madagasikara sy ny fanjakan’i Arabia Saodita dia haorina tsy ho ela eto amintsika ny foiben-toerana masoivohon’ity firenena ity. Nanamarika ny minisitra Saodiana fa efa ela no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Malagasy sy ny Saodiana, fiaraha-miasa izay nisahana sehatra maro toy ny fifanakalozana ara-barotra, ny tetikasa samihafa mahakasika ny angovo sy ny fotodrafitrasa ary ny fanamboaran-dalana, izay vatsian’ny banky Saodiana momba ny fampandrosoana, ny fanampiana mitentina 370 tapitrisa dolara teo amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, ny famatsiana 500 000 dolara ho an’ny ady tamin’ny valanaretina Covid-19. (Jereo Sary Tohiny)
Hohajariana ny Boulevard Ratsimilaho ary ampiakarina hatramin'ny 6 metatra ny haavony mba tsy ho ravan'ny loza voajanahary tahaka ny teo aloha. Ankoatra izay dia natolotra amin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fanajariana ny lalana miainga avy eo Morafeno mivoaka eo amin'ny Hopitaly Be, izay hanala ny fitohanana ao an-tampon-tanànan'i Toamasina. Narafitra natao "béton" ity lalana ity mba hateza sy haharitra aman-taona maro ary malalaka ahafahan'ny fiara hivezivezy. Nasiana lalana natokana andehanan'ny mpandeha an-tongotra. (Jereo Sary Tohiny)
Natomboka ny dingana voalohany amin'ny tetikasa MIAMI ao Toamasina, dia ny fanajariana ny tapany avaratra manomboka amin'ny Hopitaly Be mifarana eo amin'ny Neptune izay mirefy 560m. Ao anatin’izany no ametrahana rarivato mirefy 800m, izay manaraka ny endriky ny sisin-dranomasina, ary hiaro ny foto-drafitrasa amin'ny onjan-dranomasina sy ny rivodoza. Hohajariana tanteraka ny moron-dranomasina hahafahana mametraka ny fototra ijoroan'ireo fotodrafitrasa : dia ny "Jardin des amoureux", ny "skate-park", ny fanaovana fanatanjahantena an-kalamanjana, sy ny tapany voalohany amin'ny toerana hipetrahan'ireo mpivarotra voanio. Haharitra 5 volana ny fanatanterahana ity dingana voalohany ity ary hitohy avy hatrany ny dingana faharoa hatrany amin'ny faha-efatra farany.